Qoraalka Jinsiga iyo isirka ee Guddiga caddaaladda dambiyadda ee Oregon Soo koobidda Golaha Fulinta
Sida lagu sheegay warbixin madaxbanaan oo cilmibaaris dowladeed ah oo uu sii daayay Xoghayaha gobolka Oregon ayna fulisay Gudiga Cadaalada ee Oregon, Kala duwanaanshaha ku xerida daroogada iyo xukunkiisa ayaa ku dhawaad meesha ka bixi doonta haaddii la ansixiyo aftida looqaadaayo qiyaasta 110. Nuqul ka mid ah warbixinta ayaa laga heli karaa halkan bogga Xoghayaha Gobolka ee Oregon.
Warbixinta maxay soo ogaatay:
Kala duwanaanshaha jinsiyadeed ee ku qabashada daroogada ayaa hoos u dhici doonta 95% Haddii codbixiyayaasha Oregon ay cod ku ansixiyaan xeerka daaweynta daroogada iyo dambi ka dhigideeda kaasoo lagu soo dari warqadda codaynta bisha Nofeembar.
Xukunnada lagu rido dadka Madow iyo kuwa Asaliga ah ee Oregon ayaa hoos u dhici doona 94%.
“Hoos u dhaca ku yimaada ciqaabta waxay keenaysaa in ay yaraata cawaaqibta ka dhalata ku lug lahaanshiyaha nidaamka caddaaladda dambiyada, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka helitaanka shaqada, luminta helitaanka amaahda ardayda ee waxbarashada, dhibaatooyinka helitaanka guriyeynta, xaddidaadda shatiyada xirfadeed iyo kuwa kale, ”ayaa lagu yiri warbixinta.
Xakamaynta xaqiiqada ku dhisan ee heerka kala duwanaanshaha ayaa ka sii darfi karta. “Kala duwanaansho kale ayaa jiri kara heerar kala duwan oo nidaamka cadaaladda dembiyada ah, oo ay ku jiraan sinaan la’aanta istaajintya ay sameeyaan booliska(booliska ooku shita) xabsi gelinta, damaanad ku sii deynta, xariga xukunka ka horeeya, go’aanada dacwad oogaha, iyo kuwa kale.” Si kastaba ha noqotee, Guddiga Caddaaladda Dambiyada ma uusan heli karin xogta maxalliga ah ee ku saabsan farqiga noocaas ah.
Yaa soo gudbiyay warbixinta:
Warbixinta waxaa sameeyay cilmibaareyaasha ugu madaxbannaan uguna awoodda badan cilmibaareyaasha dowladda ee arrintan la xiriira. Warbixinta waxaa soo aruuriyay Guddiga Cadaaladda Dambiyada Oregon Waxaan soo bandhigay xoghayaha gobolka Oregon.
Guddiga caddaaladda dambiyadda wax lug ah kuma lahan ololahan. Waa gole dawladeed, ujeeddadiisuna waa inay bixiso “gole dhexe oo aan eex lahayn oo loogu talagalay horumarinta iyo qorshaynta siyaasadda gobolka oo dhan” si “loo wanaajiyo waxtarka iyo waxtarka nidaamka cadaaladda dembiyada ee heer gobol iyo heer degmo.
Falanqaynta Guddiga Caddaaladda Dembiyada ee Oregon waa tii ugu horreysay ee abid loo diyaariyo cabirka cod-bixinta. Sharci-dajiyayaashu waxay awood u yeesheen inay weydiistaan falanqaynta noocan oo kale ah tan iyo 2014, waxayna sameeyeen sidaas sannadkan ka dib markii ay ku boorriyeen inay sidaa sameeyaan More Treatment campaign, Kuwaasoo taageersan qiyaasta aftida 110.
Qiyaasta 110 waxay bedeshaa habka Oregon ee daroogada. Qiyaasta ayaa ballaarin doonta marin u helka gobolka ee daaweynta daroogada iyo adeegyada soo kabashada, oo lagu bixiyo qayb ka mid ah canshuuraha iibka marijuana ee sharciga ah. Intaa waxaa dheer, cabirku wuxuu xukumayaa haysashada daroogada heerka hoose. Mana ahan mid sharci ka dhigaaya daroogada.
Qiyaastii 10-kii qof ee qaangaarga ee reer Oregon mid ka mid ah ayaa u baahan daaweyn ku aadan cilad ka haysata isticmaalka daroogada xaddhaafka,laakin ma aysan hellin, sida laga soo xigtay dowladda dhexe ee federaalkat iyo Oregon waxay ku dhowdahay meesha ugu hooseysa marka loo eego dadka u baahan daaweynta laakiin aan helin.
Qiyaastii 8,900 dadka reer Oregon ka mid ah ayaa la xeraa sanad kasta iyadoo lagu soo eedaynaayo dacwado fudud oo la xiriirta haysashada xadiga yar ee daroogada iyadoo ayna tahay dambiyada ugu culus, sida ku xusan lambarradii ugu dambeeyay ee Guddiga Cadaaladda Dambiyada ee Oregon. Taasi waxay u dhigantaa in saacadii hal qof oo madow ama dadka asalka ah la xero, dadka midabka madow iyo kuwa asalka ah ayaa si aan sax ahayn loo bartilmaameedsadaa.
Qiyaasta aftida 110 ayaa heshay in ka badan 70 ayidaad oo uu ka helay hay’addo ka dhisan guud ahaan gobolka oo dhan, oo ay ku jiraan Unite Oregon, Isbahaysiga Bulshooyinka Midabka, NAACP Portland, Eugene-Springfield NAACP, Central City Concern, Qabiilooyinka Isbahaysiga ee Grand Ronde iyo kuwa kale oo badan.
Ololaha More Treatment In uu gudbo qiyaasta aftida 110 ma jiraan mucaarad abaabulan oo ka soo horjeedo.
Aqri in badan ooku saabsan
● Skanner waa daabacaadda ugu weyn uguna da’da weyn oo ay leeyihiin dad madow ah oo ka jirta Oregon. Aqri waxa ay ka yiraahdeen warbixinta: Guddiga Caddaaladda Dembiyada ee Oregon: Cabbiraadda 110 waxay ku dhowdahay in ay cirib tirto kala duwanaanshaha jinsiyadeed ee ku qabashada daroogada, xukunnada
● Halkan ka aqriso warbixinta.